Kutaurirana naPedro Feijoo, munyori we Un fuego azul | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaurirana naPedro Feijoo, munyori we Un fuego azul
Mifananidzo. Pedro Feijoo's Twitter
A Peter Feijoo Ndakasangana naye kwake Vana vegungwa, nyaya nhema yakaiswa mukati Vigo (kumusha kwake) kwandaida chaizvo. Asi pane hunyengeri nekuti ini ndine kushaya simba kweGalicia nevanyori vayo. Ini ndanga ndichangobva kutaura naye Arantza Portabales uye ikozvino ndinozviita naFiijoo, kuna ani Ndinonyatsokoshesa nguva yako, kuzvipira uye mutsa. Tiudze kunyanya zvishoma, sezvo iine bhuku idzva, Moto webhuruu.
Kubvunzana naPedro Feijoo
Pedro Feijoo: Zvakanaka ... Chokwadi ndechekuti kwete, Ini handitombo rangarira chekutanga izvo zvandakaverenga (ndakatanga kuverenga ndichiri mudiki kwazvo), kana kekutanga kuti ndakamira pamberi pe Bepa risina chinhu kuda kutaura nyaya ... Zvino, zvandinoyeuka ...
PF:… ndiro bhuku rekutanga rakandishamisa, yekutanga yakandityaira kuda kunyora: Polaroid, ivo nzombe suso.
PF: Buff, chokwadi ndechekuti Ini handidi kwazvo aya marudzi emibvunzo, nekuti vanogara vachiguma vachindisiya munzvimbo imwechete sepavakandibvunza kana ndaida Amai kana Baba zvakanyanya. Ndine zvakawanda zvandinoda, uye ndangariro dzakaipa kwazvo, saka kana ndikatanga kuzvinyora, ndine chokwadi chekuti ndinopedzisira ndasiya akawanda kunze. Saka zvandiri kuzokuudza ndizvo zvazvaive yekupedzisira yakandinakidza chaizvo, zvekuti ungafunge zvakare kunyora kwangu kubva pane chero maonero anogona. Pierre Lemaitre.
PF: Ndinoyeuka imwe nguva yehuduku hwangu, inowirirana nemamiriro ezvinhu ehupenyu anorwadza, mandingadai ndaida kuve nepedyo Dorian Grey. Zvino, kubva ipapo kusvika pakuda kugadzira chero eanoyemurwa mavara ... Maitiro angu ekuve haandibvumidze kuchengeta zvishuwo zvakadaro. Ini ndiri kutadza zvachose kufungidzira pachangu ndichigadzira zvandinoyemura.
MIBVUNZO: Panguva yekunyora, kwete mazhinji, chokwadi ... ndinogara ndichinyora neruoko, mumabhuku ekunyorera zviri pakati nepakati, saka kana nyaya yangobaya mumusoro mangu, ndinogona kunyora chero kupi, pasina kuda zvakanyanyisa kupfuura pepa neingi. Uye kune izvo zve leer… Hamheno kana, izvozvi zvandinozvifunga. Zvakawanda, ndisiye ndega.
PF: Sezvandakakuudza, chero munhu kwavanogona kundisiya ndega.
PF: Sezvandataura mune mumwe wemibvunzo yekutanga, yekutanga, makore mazhinji apfuura, aive Suso de Toro, uye wekupedzisira Pierre Lemaitre.
PF: Chero ani anozvitsvaga zvachose akabata mwedzi yakati gare gare.
MIBVUNZO: aya mabhuku pulp, iwo eiyo tambo yeiyo kiosk yehupenyu hwese, kana nhasi vakasunungurwa zvakare. Uye, nyora ... Chokwadi ndechekuti Ini handisi kunyora chero chinhu. Kwenguva yekutanga kubva pandakatanga kutsikisa, makore mapfumbamwe apfuura, ino inguva yekutanga kuti may l (y inodiwa) mira kuti uzorore. ari process kuumba de Moto webhuruu zvaityisa. Yakareba, yakaoma, inoda kwazvo uye inoparadza munzira dzakawanda kupfuura chero munhu angafungidzira, saka ndinotenda pachokwadi kuti handizokwanisa kunyora chero chinhu chitsva kusvikira mweya wangu waoma kubva pane zvese zvawakafumurwa uchigadzira bhuku iri.
MIBVUNZO: Kutendeseka, ini handina kana kukwanisa kuzvitaura, uye handifunge kuti ndini ndinofanira kuzviita. Ndiri mukomana akagara aine rombo rakanaka, pamwe kunyangwe isina kukodzera iyo, saka handifunge kuti nyaya yangu yakanyanyowandirwa sekundiisa pano kuti ndigare pachigaro zvichibva pane zvandakaona. Dai ndakapusa zvekutonga nharaunda kubva pane zvandakaona, ndingadai ndisiri kururamisa kuzviuru nezviuru zvevanyori kuti mazuva ese vanosiya maziso avo pabepa kana pakombuta, nemaoko avo kufona pamasuo e Muparidzi kusviba kukurirwa nekuti chipo chakatambira icho unogona kungovakweretesa la kutarisirwa ivo pasina mubvunzo vakakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kutaurirana naPedro Feijoo, munyori we Un fuego azul
Mabhuku aJavier Castillo